पल शाहको ‘हाई डिमाण्ड’ कि ‘सस्तो क्रेज’ ?Main Samachar
पल शाहको ‘हाई डिमाण्ड’ कि ‘सस्तो क्रेज’ ?
४ कार्तिक २०७७, मंगलवार १५:०७ प्रकाशित
काठमाडौं । कोरोना महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्र ठप्प छ । यसै क्षेत्रमा आबद्ध धेरै व्यक्तिको रोजीरोटीसमेत महामारीसँगै गुमेको छ ।
सिने क्षेत्रका कतिपयलाई कोरोना महामारी बर्बादी बन्यो भने कतिपयलाई मालामाल पनि । यसैको छेकोमा केही कलाकारको व्यस्तता यसरी बढेको छ कि मानौं, अब लामै समय चलचित्र निर्माण नभए पनि उनीहरुलाई खास असर गर्नेवाला छैन ।
त्यस्तै कलाकारमध्येका एक हुन् अभिनेता पल शाह । उसो त पलको पृष्ठभुमि हेर्ने हो भने उनी म्युजिक भिडियो हुँदै चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश गरेका हुन् । जब पलको चलचित्र क्षेत्रमा प्रवेश भयो तब उनलाई सम्भावना बोकेका नायकको रुपमा लिइन्थ्यो ।
उनी नेपालको टप नायकहरुको सूचीमा छन् । ‘रुखले जरा भुल्न सक्दैन’भने झैँ पलले पनि आफ्नो जरा अर्थात् म्युजिक भिडियोलाई त्याग्न सकेनन् ।
अब यसको भार पलको आगामि करियरको दौरान देखिन सक्ने छ । अचेल चलचित्र नबने पनि पललाई खासै कामको खाँचो परेको छैन ।
दैनिकजसो म्युजिक भिडियो सुटिङमा उनी व्यस्त भइरहन्छन् । त्यसरी नै ह्वारह्वार्ती युट्युबमा उनी अभिनित भिडियो आउने क्रम पनि जारी छ ।
कलाकारमाथि दर्शकको अपेक्षा हुन्छ कि यो कलाकार भेट्न पाउँ । तर हरेकदिन जसो आफूलाई मन परेको कलाकारलाई युट्युब साथै सामाजिक सञ्जालमा पाउँदा त्यो कलाकारको महत्व कम हुँदै जान्छ ।
यही कुरा अहिले नायक पल शाहमा पनि लागु भएको छ । उनी नियमित जस्तै सामाजिक सञ्जालआर्फत लाइभमा आउँछन् । उनलाई मिडियामा पनि प्रशस्तै भेट्न थालिएको छ ।
यसरी नै पलले आफ्नो लयलाई निरन्तरता दिए भने हलमै गएर टिकट काटेरै हेर्नु पर्ने बाध्यता नहोला ! जसलाई सजिलै सामाजिक सञ्जालदेखि युट्युबमा पाउन सकिन्छ । उसलाई हेर्नका लागि दर्शकले किन पैसा तिर्नु ?
अझ् पललाई सस्तो बनाइदिएको अर्को कुराको चर्चा गर्ने हो भने त उनी जो सँग पनि म्युजिक भिडियोमा देखिनुलाई लिन थालिएको छ । टिकटक स्टारदेखि भाइरल भइरहनेहरुसँग उनको जोडी फिक्स गरिन्छ ।
पलले भुलि सके कि जस्तो छ ।
उनी कुशल अभिनेता हुन् न कि कुनै भाइरल कन्टेन्ट । अझ् कतिपय म्युजिक भिडियो निर्माताको कुरा सुन्ने हो भने यसो भन्छन्– जब सस्तोरुपमा हिरोलाई नै नचाउन पाइएको छ भने अरुलाई किन नचाउनु ?
अब यसैगरी पल सबै ठाउँमा पैसाकै पछि लाग्ने हो र सस्तैमा प्रस्तुत हुने हो भने चलचित्र क्षेत्रमा दीर्घकालीन रुपमा स्थापित हुन उनलाई मुश्किल पर्दै जाने हल्ला त चलिरहेकै छ ।
पलले चलचित्र साइन नगरेका पनि होइनन् । दर्शकले अपेक्षा गरे जस्तो अभिनेता हलमा नपाउँदा निराश बन्ने अवस्था सृजना नहोस् ।
पलले आफूलाई यसरी सस्तो रुपमा प्रस्तुत नगरुन । हलमा दर्शकले उनका प्रस्तुतिलाई चाख मानेर हेरिरहुन । शुभकामना ।